Glass ruomba churn chirongo
girazi kendi chirongo
girazi chikafu chirongo
girazi uchi chirongo
girazi Mason muchinu
girazi ruomba chirongo
girazi Pudding chirongo
Glass chirungo chirongo
Reagent girazi Bottle
Glass Kanjera muchinu
Glass Cup kana Mug
Glass Waini Bottle
California waini girazi bhodhoro
Doro girazi Bhodhoro
waini tsvuku girazi bhodhoro
dehenya musoro dehenya girazi bhodhoro
Vodka girazi Bhodhoro
Whiskey girazi Bhodhoro
Zvakanaka Glass Bottle
Essential mafuta Bhodhoro
Glass Bhodhoro zvizorwa
Glass mafuta Bhodhoro
Chipikiri Polish Glass Bottle
Pefiyumu girazi Bottle
Tingaita sei kuwana ivhu?
Chokwadi, tinogona kupa pachena mharidzo kuti kuongorora unhu. Zvisinei unofanira kubhadhara mitoro.
Chatingaita kudhinda pamusoro hombodo?
Sure. Various Kudhinda nzira zvatichapa, akadai sirika chidzitiro yokudhinda, kupisa tsikwa uye kudhindwa sirivha. Uye tinogona kupa frosting, ruvara spraying, decal, makorari, yakanamirwa pamifananidzo uye chitaridzi chinamirwa etc.
Rinhiko yenyu nguva kugadzirwa?
Kazhinji inoda anenge 15-20days.
Chii mubhadharo wako?
T / T, 30% T / T muripo pachine, 70% mwero akabhadhara pamusoro kopi p. L / C pa kuona kunogamuchirwa.
Unogona kuita kuti akuumbe itsva customized saizi zvandinoda?
HONGU, tinogona kuita kuti akuumbe here
Chii chakaipa kutungamirira nguva?
Nokuti ndiri zvigadzirwa, isu achatuma zvinhu kwamuri mukati 7-15 basa mazuva pashure tinogamuchira payment.For enyu nezvimwewo, mazuva 35-45 mushure okutambirwa 30% dhipoziti T / T kana L / C pa kuona
Kana chakaremara uye akaputsika mabhotoro, ungaitei vanozvipedza kwatiri?
Isu ichatsiva chakaremara uye akaputsika mabhodhoro yenyu inotevera kuti kana sezvo makazvireva zuva.
Unhu hwako kuzvidzora sei?
Tine 3rd chikamu QC pachedu chikwata chedu kuzoongorora mumwe murayiro kana zvakakodzera.
Tingasarudza sei kutumirwa nzira?
Nokuti murayiro duku, tichaita zano yaunosarudza aiva dzakadai dhl, FEDEX, Ups, TNT, etc.For hwakanyanya hurongwa, tichaita zano iwe sarudza kubudikidza sea.If muri kukurumidza, unogona kusarudza nendege. We ichakubatsira kusarudza zvakanaka eficient kutumirwa nenzira maererano zvizere zvinodiwa zvenyu.